Miziriziry ny fanjakana : hitohy ny grevin’ny SMM | NewsMada
Miziriziry ny fanjakana : hitohy ny grevin’ny SMM
Araka ny efa nanambaran’ny filohan’ny SMM, Fanirisoa Ernaivo, azy ny faran’ny herinandro teo, hitohy, anio, ny hetsika fitokonana ataon’izy ireo. Manao tohivakana koa ny fanambarana fanohanana sy fanamelohana ny tranga niseho teny amin’ny lapan’ny Fitsarana Anosy ny herinandro teo. Anisan’izany ny CTM sy ny eo anivon’ny sendikàn’ny fananan-tany, samy mivondrona eo anivon’ny Randrambaon’ny sendikà (SSM). “Manameloka ny fampiasan-kery amin’ny sendikalista tsy mba manana fitaovam-piadiana izahay. Mahagaga raha lasa herim-pamoretana ny tandroka aron’ny vozona”, hoy izy ireo. Manoloana izany, miantso ny fanjakana hifampiresaka sy hitady vahaolana ny eo anivon’ireo sendikà ireo…
Etsy andaniny, manaraka ny fitokonana hatrany amin’ny 98% koa ny mpitsara any Mahajanga. “Manameloka ny herisetra ary manohana ny birao nasionalin’ny SMM sy ny mpirakidraharaha (SGM) izahay amin’ny fitakiana ny zo. Mihenjan-droa ny tady satria mampiasa hery ny fanjakana. Izahy eo anivon’ny sendikà koa, tsy hanaiky lembenana hatramin’ny farany…”, hoy ny filoha lefitra any Mahajanga, Jaona Clement, afakomaly.
Tompon’andraikitra tanteraka ny fitondrana
Miantso firaisankina amin’ny rehetra noho ny tolona iraisana sy ny tombontsoa iraisana izy ireo. “Tsy tokony hivaky na hisaraka isika. Mampiomana ny delegen’ny sendikà koa izahay fa mety hisy fivoriambe tsy ara-potoana sy maika hatao any Antananarivo, handinihana ny hanohizana ny tolona sy ny fanapahan-kevitra horaisina”, hoy ihany izy.
Hatreto, mbola miziriziry tsy mamaha izao olana sy fitakiana izao ny fanjakana. Tsy ho afa-bela ary ho tompon’andraikitra tanteraka anefa izy ireo manoloana ny fikatsoan’ny fitsarana manerana ny Nosy.